မည်သူမဆိုအောင်မြင်တဲ့ Forex ကုန်သည်ဖြစ်လာနိုင်သလား? | FXCC
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ - မည်သူမဆိုအောင်မြင်တဲ့ Forex ကုန်သည်ဖြစ်လာနိုင်သလား?
မည်သူမဆိုအောင်မြင်တဲ့ Forex ကုန်သည်ဖြစ်လာနိုင်သလား?
တစ်ဦးသံသယမရှိပါကအောင်မြင်သောလက်လီ Forex ကုန်သည်များကမ္ဘာဂြိုဟ်၌ရှိသမျှသောထောင့်ကနေအားလုံးပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာ။ တချို့ကအလွန်လျင်မြန်စွာ task ကိုမှယူအချို့ကြာ, အခြို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်, အခြားသူများအပြည့်အဝအချိန်လုပျ, အခြို့ကိုအခြားသူများကိုမကျင့်, အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးစိန်ခေါ်မှုသည်အဘယ်အရာကိုဦးတည်ရည်စူးဖို့အချိန်ရှိသည်ဖို့ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။
ကကုန်သွယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အချို့စူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသော, ထူးခြားတဲ့အခွက်တဆယ်ရှိသောလက်ခံခဲ့သည်ပညာ၏မျက်နှာ၌ပျံအဖြစ်အဖြစ်မှန်အဆိုပါခွက်တဆယ်ကျနော်တို့ကုန်သွယ်အောင်မြင်မှု ISN '' နှင့်အတူပေါင်းသင်းစေခြင်းငှါအခါက, အစပိုင်းတွင်ကျွန်တော်အာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်ကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအချက်င် t ကိုအမှန်တကယ်မှာအားလုံးအခွက်တဆယ်။ ကျွန်တော်တို့အတော်များများမဟုတ်ဘဲဒီဇိုင်းထက်မတော်တဆမှုအားဖြင့်ကုန်သွယ်အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲကြလိမ့်မည်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, အရေးပေါ်အတိုးနှုန်းနောက်ပိုင်းတွင် 2008 မှစ. , စံဖြစ်လာခဲ့သည်အစဉ်အဆက်ကတည်းကလက်လီ Forex ကုန်သွယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောမျာထည်းထည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကုန်သွယ် ပတ်သက်. ပင်မမီဒီယာကပေးပို့တဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ကုန်သွယ်ကြမ်းပြင်ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်တို့ကိုလှည့ပါတယ်; သူတို့ counterparts တွေကိုရန် "ဝယ်ရောင်း" ညွှန်ကြားချက်ဟောင်နေတဲ့အဖြစ်ငယ်ရွယ်ရိုးရာ, အင်္ကျီလက်, နှစ်ခုကြိုးဖုန်းဖုန်းများ (တစ်ဦးချင်းစီနားကိုအပေါ်တဦးတည်းကျိန်းဝပ်) တက်လှိမ့်။ ထိုသို့သောပုံရိပ်တစ်ခုကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရဲ့ပေးသော, အနုပညာလှုပ်ရှားတဲ့ပြတိုက်အတွက်ပိုင်ဆိုင်ဆို form မှာ, ထိုနေဆဲကြောင်းလမ်းကောက်ယူပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ဝင်ငွေနှင့်အနာဂတ်တည်ဆောက်နိုင်သည့်အပေါ်မဆိုရေရှည် bankable ရလဒ်များကို, ကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုစျေးကွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ရန်မအလိုလိုနည်းလမ်းများရှိမယ့်အဖြစ်ကိုမှန်ကန်ခွက်တဆယ်, ယခုဘဏ္ဍာရေးအင်ဂျင်နီယာတည်ရှိသည်။
80 ကျော်က Wall Street ရှယ်ယာကုန်သွယ်၏% ယခု algorithms များကကောက်ယူသည်နှင့်တစ်ဦးသိသိသာသာအချိုးအစား HFT ချေါတယျ၏ဘုံတှငျကငျြးပခဲ့သညျ, အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကုန်သွယ်ခြင်း, ကိန်းဂဏန်းများ Forex ကုန်သွယ်စပ်လျဉ်းဆင်တူသည်။ ကသင်္ချာနဲ့ရူပဗေဒ quants သူကိုကုဒ်တွေနဲ့င်နှင့်ကုန်သွယ်အစီအစဉ်များအကြံကိုကြံစည်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မည်သည့်အခွက်တဆယ်ရှိလျှင်, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံများနှင့်လာမည့်အခြေခံပြက္ခဒိန်သတင်းပေါင်းစပ်အပေါ်အခြေခံပြီးထစေခြင်းငှါ။ တစ်ဦး hunch ရှိပါတယ်သူကို manual ကုန်သည်မဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကနောက်ကျောမူရင်းမေးခွန်းကိုပြန်ပြောင်းသကဲ့သို့, သူတို့ကအချိန်ရှိသည်ဆိုပါက "မည်သူမဆိုတစ်ဦးအောင်မြင်သောကုန်သည်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ" ဟုတ်တယ်, အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်, (ပိုက်ဆံ၏သိသာပြဿနာထက်အခြား) ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအလားအလာအတားအဆီးရဲ့အရှိဆုံးအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးတင်ပြထားပြီးအဖြစ်, သင်ပထမဦးဆုံးအကောင့်သို့သင့်ရဲ့ငွေစု၏အလွန်အကျွံအပေါင်ကြဘူးလျှင်အကောင်းဆုံးရဲ့ (အစပိုင်းတွင်) တကယ်တော့, ကုန်သွယ်ရေးစတင်တာငွေမလိုအပ်ပါဘူး။ အစောပိုင်းကာလများတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြန်, မျှော်လင့်ချုံ့ချဲ့မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ရုံကျိုးနွံပြန်လာ (Roi) ကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့နည်းနည်းအဖြစ် $ 1 များအတွက်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်အပေါ်နှစ်ကကြီးထွားမှု, အပေါ်% ရွယ်တစ်နှစ်ခန့် 50, တစ်ပတ်ကို 500% အကျိုးအမြတ်ပရောဂျက်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်ယခုပိုမိုမြင့်မားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာပိုပြီးပိုက်ဆံနေရာယုံကြည်မှုခံစားရနှင့်ကုန်သွယ်ရေးနိုင်ပါတယ် စာရေးတံ။
ကျနော်တို့အလုံအလောက်အားလပ်ချိန်မှာအချိန်မရှိဘူးဆိုရင်, ဘယ်လောက်အစဉ်မပြတ်နေအောင်မြင်သောကုန်သည်များဖြစ်လာရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးကြမည်နည်း တကယ်တော့တစ်ဦးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့နှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရကျွမ်းကျင်မှုကုန်သွယ်မှုဖို့အချိန်ကိုရှာတွေ့ပါသလဲ? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကဲ့သို့သောအခြေခံဘဝကျွမ်းကျင်မှုကိုမကြာခဏလျစ်လျူရှုငါတို့သည်အချို့လိုအပ်ပါတယ်; အဖွဲ့အစည်းက, စည်းကမ်း, အထပ်ထပ်, ငါတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါကြှနျုပျတို့ဖြစ်ကောင်းကုန်သွယ်နှင့်အတူပေါင်းသင်းမဟုတ်ချင်ပါတယ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်မှု။